Sujana Dhakal - ३ लाख अफर आयो
Topic: Sujana Dhakal - ३ लाख अफर आयो
Author Topic: Sujana Dhakal - ३ लाख अफर आयो (Read 11406 times)
« on: March 09, 2015, 02:08:16 AM »
मोडल सुजना ढकालसंग कुराकानीः
कलाकारिता क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो ?
टीभी धेरै हेर्थे । मलाई रेखा थापा र नम्रता श्रेष्ठ धेरै मन पर्ने । उहाँहरुलाई देखेपछि मलाई पनि यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो । एसएलसीपछि भिडियोहरु गर्न थाले । यसरी नै म अगाडि बढ्दैछु ।
पहिलो संयोग कसले जुराइदियो ?
रेजिना रिमाल र आकांक्षा बत्स्यालको म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेपछि अफरहरु धेरै नै आउन थाले ।
यो क्षेत्रमा सवभन्दा बढी मनपर्ने के ?
धेरै मानिसहरुले चिन्छन । हाम्रो क्षमता देखाउन पाइन्छ ।
पछि के बन्न चाहनुहुन्छ ?
चलेको हिरोइन बन्न चाहन्छु ।
यो क्षेत्रमा के देख्नुभयो र सफल नायिका बन्ने सपना बोल्नुभयो ?
परिवारको त्यतिधेरै सपोर्ट छैन । यो क्षेत्रमा भविश्य छैन, त्यसैले पढ भन्नुहुन्छ । तर मेरो ममीले मलाई सधै प्रेरणा दिइराख्नुभएको छ ।
तपाईलाई नायिकामा छान्नुपर्यो भने के छ तपाईसँग अरु भन्दा फरक ?
सवभन्दा पहिलो त म गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स छ । एक्टिङदेखि डान्ससम्म राम्रो गर्न सक्छु । फेस पनि क्यामरामा राम्रो लाग्छ ।
तपाईलाई मन पर्ने नायक–नायिकाहरु ?
नायकमा जीवन लुइँटेल, अनमोल केसी, आर्यन सिग्देल । नायिकामा रेखा थापा र नम्रता श्रेष्ठ ।
मायाप्रेमको विषयमा तपाईको धारणा के ?
एकअर्काको कुृरा शेयरिङ गर्ने, समस्या समाधान गर्ने हो जस्तो लाग्छ ।
तपाईको लभ परेको छ कि छैन ?
केटा साथीहरु त छन । तर ब्वाइफ्रेण्ड चाहिँ अहिलेसम्म छैन । मलाई लक्ष्यमा पुग्नु छ । त्यहाँसम्म नपुगिन्जेलसम्म स्टडी र संघर्ष गरिनै रहनेछु । लभका कुरा त त्यसपछि गरौँला नि ।
सेक्स भनेको के हो ?
मन मिलेर हुने कुरा हो ।
सेक्सको अनुभव लिनुभएको छ ?
ब्लुफिल्म हेर्नुभएको छ ?
त्यस्तै ८–९ वर्षको उमेरमा । ठूलठूला दिदीहरुले सिडीमा ल्याएर हेर्नु भएको रहेछ । मैले पनि त्यही देखेको ।
प्रस्तावहरु चाहिँ कत्तिको राख्छन ?
फेसबुकमा कुरा गर्दै जाँदा धेरैले प्रस्तावहरु राख्छन । यसैक्रममा एक जनाले तपाईलाई तीन लाख दिन्छु मसंग भक्तपुर जाऊँ भन्यो । मैले उसलाई पुलिस केस गर्छु भने अनि उसको फेसबुकनै ब्लक गरिदिएँ ।
suzana dhakal.jpg (39.39 kB, 600x900 - viewed 1108 times.)
sujana dhakal on bed.jpg (79.83 kB, 704x960 - viewed 760 times.)
Re: Sujana Dhakal - ३ लाख अफर आयो
« Reply #1 on: March 09, 2015, 04:11:10 AM »
Who would pay that ?
« Reply #2 on: March 10, 2015, 08:58:26 PM »
Quote from: kurakani on March 09, 2015, 04:11:10 AM
May be it is an advertisement.
Bargaining garna painchha hola ni
« Reply #3 on: July 09, 2015, 01:03:17 AM »
सुजना ढकाल, मोडल तथा अभिनेत्री
सुजनाको डेब्यु चलचित्र ‘आवारा’ हो । जुन चलचित्र बिहीबार (आज) पहिलोपटक प्रिमियर हुँदै छ । उनी उक्त चलचित्रबाट आशावादी पनि छिन् । ‘आवारा’ मा बिन्दास युवतीको भूमिकामा रहेको उनले बताइन् । मोडलिङ र अभिनयमा दुवैमा उत्तिकै रुचि लिएर अगाडि बढिरहेकी उनले भनिन्, ‘प्रेमीमा पनि मेरो राम्रो भूमिका छ । यो त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा आधारित चलचित्र हो ।’ विवेक थापाको निर्देशन तथा कृष्णश्री काफ्लेको निर्माण रहेको ‘प्रेमी’ मा सुजना एक कुसल प्रमिकाको भुमिकामा दर्शकले पाउनेछन् । ‘प्रेमी मेरो दोस्रो चलचित्र हो’ सुजना भन्छिन्, ‘प्रेमीबाट दर्शकको प्रेम पाउने अपक्षा गरेकी छु ।’
« Reply #4 on: August 04, 2015, 02:36:49 PM »
सेक्स मन मिलेर हुने कुरा ः सृजना
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा भबिष्य खोज्दै लामो समय देखि नै सँर्घषगर्दै आइरहेकी नब नायिका सुजना ढकाल चर्चित हिरोईन बन्ने आफ्नो ईच्छा र सपना रहेको बताउँछिन् । हरु को सँख्या पनि थुप्रै छ । झापा स्थायि घर भएर काठमाडौ लाई कर्मथालो बनाइरहेकि १९ बर्षयि सुजनाले करिब ३६ वटा म्युजिक भिडियो र ३ बटा चलचित्रमा मा अभिनय गरिसकेकि छन् । सुजना ले ३ वटा चलचित्रमा पनि अभिनय गरिसकेकि छन् । सुजना को मुख्य भुमिका रहने पछिल्लो चलचित्र नालापानी छायांकन मा जादैछ । रिमेश अधिकारी को लगानि तथा शिबम् अधिकारी को निर्देशन ऐतिहासिक चलचित्र नालापानि शिबम अधिकारी को निर्देशन र रिमेश अधिकारी को लगानी मा बन्न लागेको हो । सुजना सँग पोखरा का युबा रँग पत्रकार शुसन घिमिरे ले गर्नुभएको कुराकानी :-
यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भयो कहिले कसरी ?
पन्ध्र बर्ष हुदाँ एसएलसि परिक्षा सकाए पछि,आकाँक्षा बस्यालको तिमिले त जे गरेपनी बोल को गित बाट यस क्षेत्रमा प्रबेश गरेकि हुँ।
अहिले सम्म मेरो ठिक छ म सन्तुष्ट छु अरु को कस्तो छ थाहा भएन ।
त्यो त आफुमा भर पर्ने कुरा हो ग्ल्यामर फिल्ड हो अलिकति त खुल्नै पर्छ तर कुन हद सम्म भन्ने कुरा हो । अँग प्रर्दशन नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
अङ्ग प्रदर्शन गर्ने , एक प्रतिस्पर्धि सुजना ढकाल पनि हुन् , हो कि होइन ?
हाहाहा मलाई त्यस्तो लाग्दैन
चलचित्रमा हिरोइन हुनको लागी के हुनुपर्छ ?
हिरोईन हुनका लागी चाहिने प्रमुख भनेको अभिनय नृत्य साथै शारिरिक बनावट चाहिन्छ मेरो बनावट को कुरा गर्नुहोला म अहिले अलि मोटाएकि छु ।अहिले सम्म त राम्रो व्यानर को फिल्म गरेकि त छैन ।मैले गरेको फिल्म रिलिज पनि भएका छैनन् । तर अब चाहीँ व्यानर निर्देशक कथा हेरेर काम गर्छु .
तपाईंलाई कोही ब्यक्तिको जीवन एक दिन जिउन दिईयो भने कस्को जीवन जिउन चाहनुहुन्छ ?
मलाई मेरै जिबन पयारो छ मलाई मेरो परिवार ले मेरो सबै चाहाना हरु पुर्याइदिएको छ त अरुको जस्तो जिवन किन चाहियो
सेक्स भनेको के हो र पहिलो अनुभव कस्तो थियो ?
सेक्स भनेको मन मिलेर हुने कुरा हो अब यो अनुभब का बारे मा कुरा नर्गुहोस् ।
बिहे कहिले गर्नुहुन्छ,जिवन साथीको रुपमा कस्तो ब्यक्ति रोज्नुहुन्छ?
अहिले बल्ल १९ बर्षकि भए बिहे त परै जाओस आफुले खोजे को जस्तो केटा समेत पाएकि छैन । मलाई माया गरोस मेरो ख्याल राखोस् त्यहि नै त होनि चाहिने ।
आफ्नो प्रोफेसन बाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिले सम्म सन्तुष्ट छु पछि के हुन्छ कसलाई के थाहा
अन्त्य मा के भन्नू हुन्छ?
मलाइ आज सम्म सबै ले माया गरिदिनु भएको छ । यो माया र साथ सदैब रहिरहोस । तपाईं सगै सम्पूर्ण पत्रकार ज्यु हरुलाइ धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
« Reply #5 on: November 03, 2015, 12:20:38 AM »
« Reply #6 on: November 03, 2015, 12:21:39 AM »
« Reply #7 on: November 08, 2015, 08:52:09 AM »
Sexy HOT body cha j hos